Mana hidhaa Qaallittii keessaa bakki Jawar fi Baqqalaa faa itti hidhan – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosMana hidhaa Qaallittii keessaa bakki Jawar fi Baqqalaa faa itti hidhan
Mana hidhaa Qaallittii keessaa bakki Jawar fi Baqqalaa faa itti hidhan bakka durriyyeen yakka ajjeechaa fi hannaa raawwatan keessatti hidhamaniidha. Maaliif achi geessaan
OMN: Oduu Amma Nu Gahe (Fulb 25, 2020)
Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen shororkeessummaatiin himataman gara Mana Hidhaa Qaallittiitti dabarfaman.
Hidhamtoota siyaasaa Galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti argaman 24 keessaa kanneen harka Mootummaa jiran, manneen hidhaa duraan turanirraa gara mana Hidhaa Idileetti akka dabarfaman guyyaa kaleessaa manni murtii Federaalaa Lidataa murteessuun ni yaadatama.
Murtee kana faana dha’uudhaan, yaadni faccisa Abukaattootaa kan “hidhamtoonni kun namoota siyaasa biyyattii keessatti dhageettii uummataa guddaa qabaniifi dhiibbaa uuman waan ta’aniif, bakka fayyummaafi nageenya isaaniif amansiisaa ta’eetti hidhamuu qabu” jedhu fudhatama dhabsiisuun, hidhamtoonni kun mana hidhaa Idileetti akka darban murtaa’ee turuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama.
Guyyaa har’aa waaree booda, hidhamtoota kana bakka duraan turanitti dubbisuuf deemnee argachuu hin dandeenye kan jedhan maatiin isaanii, gara Mana hidhaa Qaallittiitti dabarfamuu dhageenye jechuun OMN-tti himan.
Miseensa maatii Obbo Jawaar keessaa tokko akka jedhutti, “bakki isaan itti Obbo Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas himatamtoota hafaan sanneen hidhan, bakka yakkamtoonni magaalaa Finfinnee garaagaraa kanneen yakka ajjechaafi hannaan himataman bakka itti hadhamanii jiran waan ta’eef, nageenya namoota qaalii kanaaf nu sodaachisa.” jechuun haala achitti uumamuu maluuf sodaa akka qaban dubbatu.
Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaafi Obbo Haamzaan duraan buufata poolisii Federaalaa kutaa qorannoo Meeksikootti argamutti hidhamanii turan.
ODUU Hatattama Abiy Biyya Gadhisee Bahuf ilmaan oromo fixaa jira kuno itii dhiyadha | Moha Oromo
VIO: Tarsiimoo Dhokataa Ilmaan Nafxanyaa!! – https://t.co/ho6fWfrE1i pic.twitter.com/qFkNd1SGIs
— Kichuu (@kichuu24) September 26, 2020
Hidhamtoota siyaasaa sababa ilaalchaafi miseensa/deeggaraa ABO fi KFO ta’aniif aanolee godina jimmaa osoo hin dabalatin magaalaa Jimmaa keessaa hidhaman:
1. Mana barumsaa Hirmaataatti namoota 302,
2. Waajjira Foolisii Aanaa 1ffaatti mana ballinnisaa 3×3 keessatti namoota 20 walitti ugguruun kan to’ataman 90,
3. Waajjira Foolisii Aanaa 2ffaatti 60, qajeelcha poolisii magaalaa dhoksaan dukkana keessatti kan to’ataman baayinni hin beekamu.
4. Waliigala akka Godina Jimmaatti namoota 2000 oltu siyaasaan hidhamee argama.